Global Voices teny Malagasy » Ekoadaoro: Ho anisan’ireo zava-mahatalanjona miisa 7 vaovao eto amin’izao tontolo izao ny nosy Galápagos · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Mey 2018 6:06 GMT 1	 · Mpanoratra Milton Ramirez Nandika (fr) i Pauline Ratzé, Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Mediam-bahoaka, Tantara, Tontolo_iainana, Tsidika
Nahatafiditra kandidà roa amin'ny fihodinana faharoa hifidianana zava-mahatalanjona miisa fito eto amin'izao tontolo izao  tamin'ny fifaninanana antserasera i Ekoadaoro : ny nosy Galápagos (ao amin'ny vondrona B, sokajy “nosy”) sy Amazonia (ao amin'ny vondrona F, sokajy “ala, valanjavaboarim-pirenena sy ny valan-javaboary natoraly”). Efa mahazatra ny ankamaroan'ny olona kokoa ny Galápagos , vondronosy ahitana karazana nosy maro miisa 125, izay avy amin'ny volkano. Mandrakotra ny 97%-n'ny toerana ao amin'ny faritra ny valanjavaboari-pirenena, izay nosokajiana ho faritra voaaro noho izany.
Miavaka noho ny karazam-biby ao aminy ity faritry ny Oseana Pasifika ity. Ohatra, hita ao i George le Solitaire , sokatra goavambe iray 70 taona izay tsy afaka mahita namana mitovy aminy. Izy irery sisa no hany biby amin'ny karazany mbola velona ary mety ho foana noho izany. Misy ihany koa ny karazam-biby hafa izay mety ho tandindonin-doza ao an-toerana toy ny géospize modeste  na ny iguane rose  Maro amin'ireo karazam-biby ao Galápagos ireo no nampiasain'i Charles Darwin  tamin'ny fandalinany momba ny fivoaran'ny biby.
Bilaogera Ekoadaoreana maro no nirehareha tamin'ireo nosy ireo, anisan'izany i Waldemar Verdugo Fuentes avy ao amin'ny bilaogy Islas Galápagos, Reserva de la Humanidad . Nitantara ny diany faharoa tany amin'ireo nosy Galapagos izy ary nahamarika ny fiovana vokatry ny fitomboan'ny mponina sy ny fizahantany.
Mitanisa ireo nosy, izay mifaninana amin'i Galápagos i Carlos Jordana, mpanoratra ao amin'ny bilaogy Tecnodatum  ary nanamafy ny maha zava-dehibe ny fiantraikan'ny fifantenana ny nosy ho anisan'ireo zava-mahatalanjona vaovao manerana izao tontolo izao ara-toekarena. Na izany aza, mino izy fa hitombo ny fizahantany, ary manantena fa tsy hanimba ireo nosy izany.
Nanaraka ny fizotry ny hetsika ary nandrisika ny mpifidy hifidy ny Vondronosy Galápagos  i Xavier Loor. Manantena ny fanohanan'ny mpamaky azy izy mba hahazoana fandresena. Tao anatin'ny herinandro monja, niakatra ho laharana voalohany tao amin'ny vondrona B (Nosy)  ny Galápagos raha tany amin'ny laharana faha-8 no nisy azy tamin'ny voalohany, ny nosy Cocos (Kôsta Rika) sy ny nosy Ometepe (Nikaragoa) no manaraka azy.
Na dia teo aza ny hafaliana tamin'ny fahombiazan'ny Nosy Galapago, nanome fanamarihana mba hamantaran'ny rehetra fa hita ao amin'ny fifaninanana ihany koa i Ekoadaoro sy ny faritra Amazôna i Ayllyn N. Franco ao amin'ny bilaogy Bludger Hecha Letra . Mihevitra izy fa tokony hanohana ny fireneny ny Ekoadaoreana ary nanoro azy ireo ny fomba hifidianana.
Fantatra ny tapaky ny volana Jolay 2009 ireo tafakatra dingana famaranana miisa 77 tamin'ny toerana tsara tarehy indrindra tsara ho tsidihana eto amin'izao tontolo izao ary notendrena tamin'ny taona 2011 ireo mpandresy. Afaka nifidy teto  ireo olona liana tamin'ny fanohanana ny nosy Galápagos ary afaka nanao izany teto  ireo izay te-hanohana ireo firenena miisa sivy, anisan'izany i Ekoadaoro, ao anatin'i Amazonia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/28/120155/
 zava-mahatalanjona miisa fito eto amin'izao tontolo izao: http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking/
 George le Solitaire: http://solitariogeorge.wordpress.com/solitariogeorge/
 géospize modeste: http://sine-die.blogspot.com/2009/06/islas-galapagos-especie-en-peligro-de.html
 iguane rose: http://ecuatorianosporelmundo.com/2009/04/13/turismo/
 Charles Darwin: http://elbarrildediogenes.blogspot.com/2009/01/master-and-commander-y-darwin.html
 Vondronosy Galápagos: http://lordsdeecuador.blogspot.com/2009/06/nuevas-7-maravillas-naturales.html
 laharana voalohany tao amin'ny vondrona B (Nosy): http://www.new7wonders.com/nature/en/nominees/southamerica/c/GalapagosIslandsArchipelago/
 Bludger Hecha Letra: http://bludgersdepalabras.wordpress.com/2009/06/12/vota-galapagos-maravilla-natural/